Ao amin'ny tranonkala ity, isika dia manao ny lahatsoratra feno ny Bit ny Bit: Social fikarohana ao amin'ny Digital Age azo jerena maimaim-poana. Raha mamaky ny boky, isika mpamaky mirefy fitondran-tena amin'ny aggregate. , Ohatra, isika, dia mirefy izay fizarana ao amin'ny boky hatao mamaky matetika indrindra. Ity antontan-kevitra dia hanampy antsika hanatsara ny boky. Isika ihany koa mihazakazaka fanandramana-matetika antsoina hoe A / B fitsapana paminaniana mba hanampiana antsika hivarotra dika mitovy bebe kokoa ao amin'ny boky. Ny zavatra rehetra ataontsika dia mahazatra amin'ny vohikala ankehitriny. Isika hanoratra azy amin'ny an-tsipiriany eto ambany, ary isika dia mampiseho ny zavatra efa nataony sy ny zavatra nianarantsika ao amin'ny ny bilaogy .
Inona no vaovao no hanangona?
Ampiasaintsika Google Analytics mba hanangonana vaovao momba ny fomba mifandray amin'ny tranonkala ity. Ankoatra izany, toy ny ankamaroan'ny vohikala, mampiasa mofomamy mba hanatsara ny zava-nitranga, manangona ankapobeny vahiny vaovao, ary manara-maso fitsidihana amin 'ny tranonkala. Masìna ianao, manondro ny "no mampiasa mofomamy?" fizarana eto ambany ny fanazavana momba ny mofomamy sy ny fomba ampiasana azy.
Misy ny vaovao fa manangona mba ho ampiasaina amin'ny fikarohana, mba hanatsarana ny boky, sy ny hanampy hivarotra ny boky.
Isika mampihatra isan-karazany ny fiarovana fepetra mba hihazonana ny fiarovana ny fanazavana izay manome antsika.
Ny ankamaroan'ny vaovao Browsing fa efa no voatahiry Google Analytics , ary afaka mamaky bebe kokoa momba ny fiarovana sy ny fiainana manokana fitsipika .
Annotations fa hametraka no mitantana ny hypothes.is , ary afaka mamaky bebe kokoa momba ny teny amin'ny fanompoana .
Ny tranonkala dia nampiantrano ny Github Pages , ary afaka mamaky bebe kokoa momba Github ny teny amin'ny fanompoana .
Moa ve isika mampiasa mofomamy?
Eny. Cookies ireo antontan-taratasy kely izay ny toerana na ny mpanome tolotra ao amin'ny solosaina famindrana ny fiara mafy noho ny Internet navigateur (raha mamela) izay mahatonga ny toerana na ny tolotra rafitra mba hahafantatra ny navigateur sy ny fisamborana ary hahatsiaro vaovao sasany.
Mba hanolotra anao ho tsara kokoa toerana traikefa, mampiasa mofomamy mba hahatakatra sy hamonjy ny safidinao ho an'ny ho avy mitsidika sy ny manangona angon-drakitra momba ny toerana aggregate fifamoivoizana.
Moa ve isika hamoaka misy fanazavana ny any ivelany antoko?
Tsy mivarotra, ny varotra, na raha tsy izany dia hamindra ny any ivelany antoko ny manokana fantatra vaovao afa-tsy natoky antoko fahatelo izay hanampy antsika eo amin'ny miasa ny tranonkala, nitarika fikarohana, na manome ny asa fanompoana ho aminareo, raha mbola ireo antoko manaiky ny hitandrina izany vaovao tsiambaratelo . Mety ihany koa ny hanafaka ny vaovao rehefa mino fanafahana dia mety ny manaraka ny lalàna, mampihatra ny toerana politika, na miaro ny antsika na ny olon-kafa ny zon'ny, fananana, na ny fiarovana.
Fahatelo antoko rohy
Indraindray, amin'ny ny fisainana mazava, dia mety ahitana rohy amin'ny tranonkala antoko fahatelo. Ireo antoko fahatelo toerana dia manana fiainana manokana misaraka sy mahaleotena politika. Isika, noho izany, dia tsy manana andraikitra na madio ny afa-po sy ny fiaraha-mientana ireo toerana mifandray. Na izany aza, dia mikatsaka ny hiaro ny tsy fivadihana ny toerana sy mandray izay hevitra momba ireo toerana.
-Pampiasana ho ny toerana, ianao manaiky ny fiainana manokana ny politika.
Raha toa ka manana fanontaniana, azafady handefa mailaka antsika info@bitbybitbook.com .